အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): နောက်ဆက်တွဲလေး
အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်)
စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းသက်သက်သာဖြစ်ပြီး၊ အပျော်ဖတ် စိတ်အပန်းဖြေရန်သာရည်ရွယ်ပါသည်၊ ဇာတ်လမ်း အတွင်း သွေးသားစပ်သူ များ အချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံမှု များပါဝင်ပါသဖြင့်၊ ထိုကိစ္စများကို စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာကြသူများ၊ ဆက်လက် ၍မဖတ်ရူကြရန်နူင့်၊ မကြိုက်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ မ၀င်ပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ၀င်ဖတ်ပါ။ မကြိုက်ရင် မဖတ်ပါနဲ့။ ရင်တွင်းဖြစ်များအား bluegyidr@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူး။
ရန်ကုန်ပြန်တုံး ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးပါ… ရန်ကုန်က ရောက်တဲ့ညမှာ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ညစားသွားစားကြတာပေါ့… စားသောက်ပြီးလို့ ည၁၂ လောက် ဆိုင်ပိတ်တော့ ဆက်က သောက်ချင်ကြတုံးဘဲ… ဒါနဲ့ ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီး ဆက်ကြရော… သောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ သောက်လိုက်ကြတာ ည ၂နာရီထိုးတော့ black label ၂ လုံးခွဲ ကုန်ပါရောလား… ဒါနဲ့ ပြန်ဖို့လုပ်ကြတော့ နဲ့နဲ့ အိမ်ဝေးတဲ့ အတွဲက မပြန်တော့ဘဲ အခန်း၁ခန်းထပ်ယူပြီး ကျန်ခဲ့တယ်… သူတို့အခန်းကို ထွက်သွားတာနဲ့ ကလေးတွေမပါတုံး မိန်းမကို အပီးလိုးမယ်လို တေးထားတဲ့ မောင်လပ်လည်း အသဲလေးကို စချွတ်တော့တာပေါ့… သူကလည်း ဘယ်ကတဲက လာနေလဲမသိ… စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး ရွှဲနေတာဘဲ…
မောင်လပ်သူ့ကို ဂျာနေရင်းက "မီး တစ်ခြားလူနဲ့ လိုးချင်လား… ဘယ်သူနဲ့ လိုးချင်လဲပြော" လို့ စလိုက်တာ…
သူက "မောင်တကယ့်ပြောတာလား… ဟိုဘက်ခန်းက ကိုညီနဲ့ လိုးချင်တယ်… မောင်လဲ သူ့မိန်းမကို တက်လိုးပေးလိုက်လေ" လို့ပြောရော…
မောင်လပ်လည်း ဂျာတာကို ခနရပ်… နောက်တာလား တကယ်လား သိရအောင် သူ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းရင်
"တကယ်လိုးမှာလား… မောင်သွားခေါ်လိုက်မှာနော်" ဆိုတော့
"အင်း… တစ်ကယ်ပြောတာ… မောင်အလိုးကောင်းတာကို မီးပြောပြထားလို့ ပိုက်ပိုက်ကလဲ မောင်လီးနဲ့ ခံကြည့်ချင်နေတာ""မီးကတော့ သိပ်ခံလို့ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး… ကိုညီလီးက မောင့်လောက်မကြီးဘူးတဲ့… အပြောင်းအလဲလေး လိုးကြည့်တာဘဲရှိတယ်"
"ကိုညီလိုးလို့ မီးမပီးရင် မောင်ပီးအောင် ဆက်လိုးပေးမှာပေါ့ကွာ… ဒါဆို မောင်ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်မယ်နော်…"
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကိုညီတို့ အခန်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်…
"ဟဲလို… ကိုညီ.. အိပ်ပြီးလား… မအိပ်သေးရင် ငါတို့အခန်းကို မင်းတို့လင်မယား ခဏလာခဲ့အုံး… ပြစရာလေးရှိလို့"
ကိုညီကလဲ "မင်းကလဲ… အိပ်မလားကွ… ဘာညာလုပ်နေတာပေါ့… မနက်မှ လာမယ်ကွာ"
ကျွန်တော်က "လာခဲ့ပါကွာ… မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးပတ်ခဲ့… မကြာဘူး…"
"အာ…ပီးရော ပီးရော… လာဘီဟေ့…" လို့ပြောရင် ဖုန်းမချခင် "ပိုက်ရေ ဟိုကောင်တွေက သူတို့အခန်းကို ခဏ လာခဲ့ပါအုံးတဲ့… မျက်နှာသုတ်ပ၀ါဘဲ ပတ်ခဲ့တော့"
မောင်လပ်လည်း အ၀တ်မပါတဲ့ ကိုယ်လုံးကို တံခါးနဲ့ အသာကွယ် ပြီး သူတို့အလာကိုစောင့်နေပါတယ်… သဲလေးကတော့ စောင်အောက်မှာ ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ အသင့် စောင့်နေပါတယ်…
ကိုညီတို့ ရောက်လာတော့ "လာ… ၀င်" ဆိုပြီး တံခါးပိတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးကို ပိုက်ပိုက်တစ်ယောက် မျက်တောင်မခတ် စိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်…
" ကိုညီ… မင်း ငါ့ မီးလေးရဲ့ ဖုတ်ဖုတ်ကို မှတ်မိလား… ငါတို့ အရင်က လိုးရင် မင်းတို့ ချောင်းနေကြလေ… အခု တ၀ကြီး ကြည့်ပေတော…”
ကိုညီက “ ကြည့်ပြီးလို့ လိုးချင်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” ဆိုတော့
“မင်းလိုးချင်ရင် လိုးပေါ့… ငါလဲ ပိုက်ပိုက်ကို ဆွဲမှာပေါ့” လို့ ပြောလိုက်တယ်…
ပြောရင်ကနေ ကျွန်တော်လည်း အသဲလေးနားသွားပြီး စောင်ကို ဆွဲခွာရင် ကားထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကုန်းရက်လိုက်တော့တယ်…. ကျွန်တော်တို့ ဂျာနေတာကို ကြည့်ရင်း…. ကိုညီတို့ အတွဲလည်း မျတ်နှာသုတ်ပ၀ါတွေ ချွတ်ချပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တက်လာပါရော…. ပိုက်ပိုက် က အိုးတောင့်တယ်ဗျ…. လေးဖက်များကုန်းလိုက်လို့ကတော့ ပြေးလိုးချင်စရာကြီး…. သူကကုတင်ဘောင်ကို ကိုင်ပြီး ကုန်းပေး… ကိုညီက နောက်ကို ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ လျက်နေလိုက်တာ ရေခဲမုန့်ကို လျက်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်….
ခဏနေတော့ သဲလေးက “ မောင်… မီးလေးကို လိုးတော့ကွာ” ဆိုပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်း ဖြဲပေးပါတယ်…. ကျွန်တော်တက်လိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ သဲလေးလက်က ကိုညီလီးကို ကိုင်ပြီး သူဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်… ကိုညီကလဲ အလိုက်သင့်လိုက်ရင် သူ့လီးကို သဲလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်….
”အား….. သဲသဲရေ…. နင့်လွေ တာကောင်းလိုက်တာဟာ….မိပိုက်တောင် နင့်လောက် မကျွမ်းဘူး…”
“ကိုညီ… မျှော့ပါတယ်ဆိုတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လိုးဘူးလား”
“မီးကို လိုးကြည့်ပါလား… အရမ်းကြိုက်သွားလိမ့်မယ်”… “မောင်ဘာလို့ တစ်ခြားကောင်မလေးတွေ မလိုးလဲ သိလား…. မီးစောက်ဖုတ်လို မျှော့မပါတော့ လိုးလို့ မကောင်းဘူးလေ…”
ကိုညီလဲ စိတ်ဝင်စားသွားပြီး… “ဟေ့ကောင်… မင်းမိန်းမကို ခဏပေးလိုးကွာ” လို့ ကျွန်တော်ကို ပြောလာပါတယ်…
ကျွန်တော်လည်း “ အေး…. မိန်းမချင်း လဲ လိုးကြတာပေါ့” ပြောရင်း နေရာဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်….
ကိုညီက ကျွန်တော်နေရာ ၀င်ယူပြီး သူလီးကြီးကို သဲလေး စောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်လိုက်ရင် စလိုးပါတော့တယ်….
“သဲသဲ… နင်က ကလေးအမေသာဆိုတယ်… စောက်ဖုတ်က စေးနေတာဘဲ…”
”ကိုညီကလဲ… စေးမှာပေါ့… မီးက ဗိုက်ခွဲမွေးတာလေကွာ…” “ ကိုညီ… ဖြည်းဖြည်းလိုး… မီးရဲ့ ဆီးခုံ နဲ့ ကိုညီရဲ့ ဆီးခုံနဲ့ကို ပွတ်ပေး…. အဲတာဆို ကိုညီ အသွင်းအထုတ်လုပ်တိုင်း မီးရဲ့ စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ပေးနေသလိုဘဲ…”
“သဲလေးရေ…. ကောင်းတယ်ကွာ…. ကိုညီ ပီးတော့မယ်”
“အင်း………. လိုး….လိုးကိုညီ… မီးလဲ ပီးတော့မယ်…. အား….အား….အာ့”
သူတို့လိုးတာကို ကြည့်ရင်း… ကျွန်တော်လဲ ပီးချင်လာတာနဲ့ အမြန် ပိုက်ပိုက်စောက်ဖုတ်ကို ဆွဲလိုးရင်း ပီးလိုက်ရပါတော့တယ်... ပုံမှန်ဆိုရင် မိန်းမချင်းတောင် အရမ်းရှက်တတ်တဲ့ သဲလေးတစ်ယောက်လည်း ယမကာတန်ခိုးနဲ့ ကဲနေပါရောလား… ဟိုအရင် တစ်ခါက အုပ်စုလိုက် လိုးကြတယ် ဒါပေမယ့် လူမလဲဘူး… အခုကတော့ လီးချင်းပါ လဲလိုးကြတာဆိုတော့ တစ်ကယ့်ကို အသစ်အဆန်း အတွေ့အကြုံပါ… ကျွန်တော်လည်း မထိမ်းနိုင်တော့လိုသာ ပီးလိုက်ရတယ် သေချာတောင် ပိုက်ပိုက်ကို မလိုးလိုက်ရဘူးလေ… အဲဒါနဲ့ ခဏနားပြီးတော့ ပြန်ဆွဲဖို့ စပျိုးရတော့တာပေါ့… ပိုက်ပိုက်နားသာကပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲနမ်းလိုက်ပါတယ်… သူကိုနမ်းရင်း လက်ကိုအနားမပေးဘဲ သဲလေးရဲ့ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးပြီး သူ့ကိုလည်း ပြန်ဆွပေးနေတာပေါ့… ကိုညီတစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့် သုတ်ရေတွေ ပြည့်နေတဲ့ သူ့မိန်းမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရ လျက်နေပါတယ်… ကျွန်တော်လည်း သဲလေး ဖုတ်ကို လျက်ရကောင်းမလား စဉ်းစားမိပါသေးတယ်… ဒါပေမယ့် ငညီ့ သုတ်ရေတွေက စီးကျနေတော့ နဲနဲတော့ ရွံတာပေါ့… အဲဒီအချိန်မှာ သဲလေးက ကျွန်တော်ကို ဆွဲလှဲပြီး သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ မျက်နှာကို တက်ပွတ်ပါရော… ညှိစိုစို အနံ့ကိုရှု ရင်းကျွန်တော်မျက်နှာ တစ်ခုလုံးကို စောက်ဖုတ်နဲ့ ပွတ်တာကို ခံရတော့ အောက်က ညီတော်မောင်က ပြန်တောင်လာပါဘီ… အဲဒီအချိန်မှာ ကိုညီတစ်ယောက်ကတော့ နှစ် ၂၀ နီးပါးလိုးလာတဲ့ ပိုက်ပိုက်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပေါင်နှစ်ချောင်းထောင်ရင်း လိုးနေပါဘီ… မောင်လပ်လည်း မျက်နှာပေါ်ရောက်နေတဲ့ အသဲလေးဖင်ကို အသာကိုင်ပြီး အောက်ကအသင့်စောင့်နေတဲ့ ညီလေးဆီကို ပို့ လိုက်ရင်း သဲလေးကို Jocky လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်…
ကျွန်တော်လည်း သဲလေးဆောင့်တာခံရင်းနဲ့ လက်က ပိုက်ပိုက်ရဲ့ နို့လေးကို နယ်ပေးနေပါတယ်…
ခဏကြာတော့ ပိုက်ပိုက်က “ငလပ်… လာလိုးတော့ဟာ… နင်ငါ့ကို သေချာမလိုးပေးသေးဘူး” ဆိုပြီး လီးချင်းလဲခိုင်းပါတယ်…
ကျွန်တော်ကလည်း “ငညီ… ဖယ်တော့… မင်းမိန်းမက ငါ့လီးကို တောင်းတနေဘီ” လို့ပြောရင်း လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံနဲ့ စထည့်လိုက်ပါတယ်…
အဆုံးထိဝင်သွားတော့ “ပိုက်ပိုက်… ပေါင်နှစ်ချောင်းကို စေ့လိုက်”
“အေး…ပြီးရင် စောက်ဖုတ်ကို ကော့ထား…” လို့ပြောရင် ဖြေးဖြေးချင် လိုးပေးလိုက်ပါတယ်…
“အား… ကောင်းလိုက်တာ ငလပ်ရယ်…” “စောက်စေ့ကို ပွတ်ဆွဲနေတာ… စောက်ရမ်း မိုက်တယ်ဟာ…”
“အား…ငါပြီးတော့မယ်…လိုးဟာ… သွက်သွက်လေးလိုးပေး…” လို့ပြောရင်း ပိုက်ပိုက်တစ်ယောက် တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်…
“ပိုက်… ငါ့ကို ကုန်းပေးဟာ… ငါ နင့်ဖင်ကြီးကို ကိုင်ပြီးလိုးချင်နေတာ ကြာလှဘီ”
ပိုက်ပိုက်ကလည်း “အေး…အေး… ငါ့ချစ်ချစ်ကို ကုန်းပေးရမှာပေါ့” လို့ပြောရင်း ကုတင်ဘောင်ကို ကိုင်ပြီး ကုန်းပေးပါတယ်… ဒီကောင်က နောက်ကိုပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကြည့်ရင်း ပြီးချင်သလိုတောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်…
ကျွန်တော်နဲ့ ပိုက်ပိုက်နဲ့ ဒီဘက်မှာ လိုးနေတုံး ဟိုဘက်မှာကလည်း တိုက်ပွဲက ကြမ်းနေတာဗျ… ကိုညီနဲ့သဲလေးက 69 လုပ်ရင်း အပီကို လွေးနေ၊ဂျာနေကြတာ…
ကျွန်တော်တို့ position ပြောင်းတော့ သူတို့ကလည်း ထလာပြီး ကုတင်ဇောင်းလေးမှာ သဲလေးက ပေါင်လေးထောင်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ကိုညီတစ်ယောက် အသေကို လိုးတော့တာဘဲ…
သဲလေးကလည်း “ကိုညီ… အသကုန် ဆောင့်ပြီး ပီးလိုက်တော့နော်… သဲ စောက်ဖုတ် အရမ်းပွန်းပြီး နာနေဘီ”…
သူတို့ပီးတော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ပိုက်ပိုက်ဖင်ကြီးကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးရင်း သုတ်ရေတွေကို စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်…
သူများတွေတော့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲမသိဘူး… ကျွန်တော်ကတော့ မိန်းမကို တစ်ခြားယောက်ကျား တစ်ယောက်က တက်ဆွဲနေတာတွေ့ရတော့ စိတ်မဆိုးဘဲ ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်လာနေတယ်ဗျ… ကျွန်တော်သဲလေးကို ပြောထားတာက မချစ်သွားနဲ့၊ ရောဂါမရစေနဲ့… ကျွန်တော်နဲ့ အတူလိုး… ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ လိုးလိုရတယ်လို့…
Posted by bluegyi at 02:25
phyoboymdy phyoboymdy4January 2016 at 07:01
kokoaung KKA45 22 March 2016 at 21:22
Yazar Human 24 May 2016 at 10:39
Yazar Human 24 May 2016 at 10:41
Unknown 28 May 2016 at 00:55
App down လို့ရလား
Kyaw Zaya 13 June 2016 at 06:21
ကိုကိုဇော် 19 October 2016 at 02:40
ကဲ ကက နဲ့တွေ့ချင် လား အဲစော်က အသက်ကြီးကြီး ဘဲတွေ ဆို ပို ကုန်းတယ် လက်ရှိလဲဘဲရှိတယ် ဒါပေမယ့်နောက်ဘဲနဲ့ လဲ အိပ်တယ် အပြော ကောင်းတယ့်လူကတော့ဖရီးဖိုက်လိူ့ရတယ်နော် စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ထောက်ကြန့်မှာနေတယ် သီ၇ီမြိုင်လမ်း ph 095280693,09794868499
စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ နော် ပစည်းကောင်းတယ် နာမည်က ဝေေ၀လင်း
TUN WAI7July 2017 at 01:40
Anissa Wijayanti6August 2018 at 19:13
Apa kabar sobat pecinta judi online di seluruh indonesia, kali ini saya akan mereview sedikit tentang judi bola dan poker Terpercaya 7asiabet.com
Situs agen bola yang kini makin dikenal di dunia online dan memang sudah tidak asing lagi bagi pemain taruhan bola online karena untuk meningkatkan kepercayaan dari para pemain maka agen bola ini menjamin dalam permainannya sangat aman dan terpercaya.
Bukan hanya bola yang tersedia di bandar judi ini namun juga ada permainan lainnya seperti poker, livecasino, slotgame dan Idnlive juga tersedia untuk Anda dan juga 7asiabet menyediakan Prediksi Bola jitu dan Akurat serta Berita MotoGP terupdate.
Dengan minimal deposit yang cukup terjangkau di kalangan masyarakat dan dengan 1 user id sudah bisa Anda mainkan semua permainannya.
Dan tentu saja Situs Judi Online ini menyediakan Link Cadangan atau yang di sebut link alternatif salah satu nya adalah Macaubet, Berikut Link Alternatif Macaubet.
bluegyidr@gmail.com သို့ အပေါင်းအသင်းတို့ တင်လိုသမျှ ပေးပို့ဝေမျှနိုင်ပါသည်..
Subscribe To အချစ်နယ်ကျွံ